Umbukiso Wegajethi Ubuyela Esiteshini 5 nge-ATEM Mini Pro | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Umbukiso wamagajethi ubuyela kusiteshi 5 nge-ATEM Mini Pro
I-Blackmagic Design namuhla umemezele ukuthi i-ATEM Mini Pro isize uchungechunge lwakamuva lwe-The Gadget Show, olukhiqizwe yiNorth One Television eBirmingham, ukuhlala emoyeni yize kunezinkinga nezinselelo zokuphambana nomphakathi.
Yethulwe ngo-2004, i-The Gadget Show uhlelo lwethelevishini olugxile kubathengi, olusebenzisa izixhumanisi ze-studio esiqeshini ngasinye. E-UK, isakazwa kuChannel 5 futhi ingenye yochungechunge olude kunazo zonke olubuyiswayo, olunikeza izindaba, ukubuyekezwa kanye nokuqondisisa kwezinye zezinto ezintsha ezivela ezweni lobuchwepheshe.
Umdidiyeli womdlalo owuchungechunge, uTim Wagg, uyachaza, “Ngesikhathi uhulumeni evumela ukukhiqizwa kwe-TV ukuthi kuqale futhi ngoJuni, iqembu lalinezinsuku ezinhlanu kuphela ukuzilungiselela ukuqoshwa kwesitudiyo. Kube wukuguquka okuqinile ngendlela emangalisayo ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi sonke besisebenza kude. ”
Uyanezela, "Sivamise ukuba neloli le-OB, elinabantu abangafika kwabangu-20 abasethiwe, obekufanele bancishiswe kakhulu ukuze kugcinwe indawo yokusebenza nephephile emphakathini."
"Ingxenye ebaluleke kakhulu yohlelo i-The Gadget Show ukuthi abethuli bethu basabele ezingxenyeni esezirekhodiwe (ama-VTs) ezisanda kuboniswa ababukeli," kuqhuba uTim. "Ngakho-ke ukuthola indlela yokuletha lezi zinto endaweni yesitudiyo kwenza uhlelo olumanzi kakhulu."
"Sikuthola kuwusizo nasezigabeni zethu zezindaba lapho okuqukethwe kuhamba khona esikrinini ukuletha into ebonakalayo engxoxweni, okuthile obekungadinga amahora omsebenzi okuthunyelwe ukuze kufakwe izithombe kwi-TV engenalutho."
“Ngaphandle kokunethezeka kweloli lethu elijwayelekile le-OB kanye nabasebenzi, besingenayo indlela yokushayela leli qapha ngokuhlanzeka, futhi besifuna esinye isisombululo esiphathekayo, esisebenziseka kalula futhi esikahle. Sasidinga futhi I-HDMI ukuxhumana. ”
Yilapho i-ATEM Mini Pro ingene khona. “Nginakho konke ukushaywa, imidwebo nama-VTs, kulayishwe kwi-MacBook yami, nangokuxhuma lokhu nge- I-HDMI ku-ATEM Mini Pro, sikwazile ukuphonsa okuqukethwe kumonitha ngaphandle komthungo. Sikwazile nokuyisebenzisa ukufaka ingxenye yethu ye-'Wallop of the the Week ', ebanjelwe iZoom. ”
Uyaqhubeka, “Kubonakala kulula. “Kodwa ngaphandle kwe-ATEM Mini Pro, besizokwazi ukuthola ubunzima bokusebenzisa ukuhamba kwamanzi okunje. Kusisizile ukuthi sikwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ama-studio acijile ahambisana nomsindo osheshayo, wokuxoxa esithanda ukuwusetha. ”
Ukwengeza, "Njengemboni eningi, imikhawulo ye-COVID yethule izinselelo eziningi, kepha njengenkampani yokukhiqiza sikuhlomele kahle ukubhekana nazo, sibonga ngokwengxenye kubakhiqizi abanjengoBlackmagic Design."
“Impendulo esiyithole esontweni ngemuva kokusakaza kwethu okokuqala ukuthi ubungeke uqaphele ukuthi kukhona okushintshile,” kuphetha uTim. "Lokho kufakazela ubuhlakani nobuchule beqembu lethu lonke lokukhiqiza."
Ngaphambilini: I-Lectrosonics Yethula i-DCHR Miniature Stereo Digital Receiver
Olandelayo: Thumela Umhleli / Umklami Womsindo